ဖုန်းနံပါတ်: + 86-15066360289
သငျသညျမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စတိုးဆိုင်!
ဘေးကင်းလုံခြုံမှု boot တက်
welt ဆောက်လုပ်ရေးဘေးကင်းလုံခြုံမှုဖိနပ် goodyear
လက်ရှိဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသောပစ္စည်းပေါင်းစပ်မှာနှစ်ဆဝါးအများဆုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်လာသည်။ တစ်ဦးတည်းသော၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာ wear ခုခံနှင့် midsole ၏အလင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းသောလက္ခဏာများအားဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်သော outsole ၏ဆန့်ကျင်စလစ်စွမ်းဆောင်ရည်အားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ လမ်းလျှောက်သည့်အခါနှစ်သိမ့်။
မြင်ကွင်းကဤအချက် မှစ. လက်ရှိအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ခြင်း, outsole စေရန်ရော်ဘာ (ru) ကိုသုံးပြီး, ru / မှ PU သည် midsole အဖြစ် polyurethane (PU), အဲဒီနောက်ကော်သို့မဟုတ်ဓာတု Bond function ကိုနှင့်မှ PU သူ့ဟာသူခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ Bond function ကိုတစျဆငျ့ အဆိုပါ midsole ဖို့ outsole ။ ၏သင်တန်း, ဖိနပ်များ၏အပြင်ဘက်ဝါးလည်းပွတ် burnished နှင့်ထွင်းထုထားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးတည်းသောပစ္စည်းပေါင်းစပ်, အမည်ရမှ PU / TPU (polyurethane / thermoplastic polyurethane) လည်းရှိပါသည်။ ဒါဟာဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေသည်။ TPU လုပ်ထားတဲ့ဝါးတစ်ရောင်စုံဝါးထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်ထို့အပြင် outsole စေရန် thermoplastic polyurethane ၏အသုံးပြုမှု, ခေတ်ပြိုင်ဒီဇိုင်နာများ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီနှင့်ဝါးပေါ်တွင်ထွင်းထုခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုလည်းကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
PU / မှ PU (polyurethane / polyurethane) ပစ္စည်းပေါင်းစပ်ထားနောက်ထပ်ကို double-layer ကိုဝါးခြင်း, outsole နှင့် midsole polyurethane ၏လုပ်နေကြသည်။ အဆိုပါ outsole များအတွက်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်သိပ်သည်း polyurethane ပစ္စည်းဟာ outsole ၏ wear ခုခံဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အသုံးပြုရမည်။ အဆိုပါ midsole အဘို့, foamed polyurethane နှစ်သိမ့်အဘို့ကိုရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
အချိန် post: ဒီဇင်ဘာ-24-2018
Xingyuan လမ်း NO.7555, Zhanglu, Gaomi မြို့,
Weifang အားမြို့, ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်